လမ်း ပျော် ငှက် က လေး ဖြစ် သွား တဲ့ သူ မ – Hlataw.com
အား… အိုး…. ရှီး…. လိုးတတ်လိုက်တာ အကိုရေ အား… အမေရေ အူး…. အား… လား… ယွန်း စောက်ဖုတ်တွေလည်း ကျိန်းနေပါပြီ အား… အီး… အင်း… လိုးချက်တွေ ပက်စက်လိုက်တာ အကိုရယ် ယွန်း ကို စွဲလန်းလောက်အောင် လိုးနေတာလား အကိုရေ အား… အကို အ အား… ယွန်း စောက်ရမ်း လာနေပြီ အား… ဖတ် ဖတ် ဖန်း ဘုန်း… အီး.. အား… ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်ကို အိုး… သေစမ်း သေစမ်း ငါ လိုးတာ ကြိုက်လား အား…. အား… ကြိုက်တယ် အင်း… ယွန်း ကောင်းနေပြီး အကိုရယ် အား… ယွန်း အား… အင့် အင့် အား… အား…. အကို ပြီး… ပြီ… အား… အား… အကို အား… ယွန်းလည်း အ အား… ပြီးပြီ အား အကိုရေ ခေါင်းတောင်မတောင် နိုင်လောက်အောင် တရစပ် ဆောင့်ဆောင့်ဝင်နေသော လီး က အားအကုန်ပစ်ဆောင့်ချရင်း ဒူးများ မခိုင်တော့တဲ့ကျမလည်း အိပ်ယာပေါ်မှောက်ကျသွားပြီး ကျမအပေါ်ထပ်ရက်ဖိကျလာသော မှောက်ရက် ဖိထားပြီး လရေများ ယွန်းစောက်ဖုတ်ထဲပန်းပန်းထည့်ရင်း နဲ့ ပြီးသွားပေမဲ့ ယွန်းဆိုတဲ့ ကျမကလည်းကတုန်ကရင် တဆတ်ဆတ်တုန်တုန်ပြီး ဝင်လာသော လရေများကိုစောက်ဖုတ်အတွင်းသားများက ညစ်ညစ်ထာပြီး ဆီးကြိုလက်ခံထားရင်း ကုတင်ထက်မောပန်းစွာ မလှုပ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရင်း အသက်ကိုဖြေးဖြေးလေးရှုရှိုက်ရင်း အမောဖြေနေမိပါတော့တယ်ရှင်